AQUAMARINE inogona kuuya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
AQUAMARINE kuongorora uye sainzi yekunyepera vhidhiyo mutambo mune imwe nyanza gungwa iyo inozivikanwa kuti inouya yeWindows uye neMac, asi zvinoita sekunge inogona kuwedzera rutsigiro rweLinux futi. Sezvinoonekwa mumifananidzo iri muvhidhiyo, hausi mutambo wevhidhiyo yechinyakare, asi rimwe remazita eIndie ayo anogona kuve akabudirira zvinoshamisa kunyangwe iwo magiraidhi anoongwa.
Parizvino, mutambo wevhidhiyo yakagadzirwa neMoebial Studios iri pasi pemushandirapamwe wekutsvagisa vanhu wavakaunza pachikuva chakakurumbira Kickstarter kutsigira chirongwa ichi. Mutori wenhau wemimhanzi anobva kuBrooklyn ndiye akatanga zvidzidzo izvi muna Ndira 2018, naTonje Thiliesen, nyanzvi yekugadzira ine chitandadzo chekutora mifananidzo uye graphic dhizaini. Iko kusanganisa kwakakurumidza kubhadharwa kugadzira iri basa renhoroondo inonakidza, mimhanzi yekuyedza, uye aya maquirky mifananidzo. Parizvino, mushandirapamwe unoita kunge uri kufamba zvakanaka uye uri kutenderera 18% yezvavanoda kukwidziridza chirongwa ichi. Asi chinonakidza chinhu pamusoro penyaya ndechekuti zvinogoneka chiteshi chavaive nacho cheLinux. Kubva pane zvidzidzo zvavakaona kuti vari kushandisa Unity injini kufambisa magirafu emutambo uye vanotarisira kuve neLinux port mune ramangwana, sezvo injini ichibvumidza. Asi izvi zvaizouya zvechokwadi mushure mekutanga kuvhurwa kweshanduro dzeWindows neMac, panguva iyoyo ivo vaizosvika pakushanda neiyo Linux vhezheni, kunyangwe ivo vachitiwo musika weLinux parizvino wakaganhurirwa uye kuti ivo vachatofanira kufunga nezvazvo it ...
Ndinovimba hachisi chirevo chakapfava kune kuda Nharaunda yeLinux zvakadii ivo vanofarira iyi mhando yenhau uye vanonyatso shanda pane iyo vhezheni yeiyo penguin chikuva. Tichafanirwa kumirira kusvika gore ra2019 kuti tione mutambo wevhidhiyo uonekwe paMac neWindows, uyezve tigoziva pamwe nechokwadi chikuru kana ichizosvika paLinux. Nekudaro, isu tinogona kugara tichitamba neWine kana iwe uchitoziva kuti iwe unogona kutamba Windows mavhidhiyo mitambo kuburikidza neSteam Play kubva kune yako yaunofarira distro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » AQUAMARINE inogona kuuya kuLinux
Iyo nyowani yekuvandudza vhezheni yeWine 3.18 inosvika ine akati wandei gadziriso